miiska dukaanka Pachinko in ay doortaan waqtiga furin
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ miiska dukaanka Pachinko in ay doortaan waqtiga furin
On bedelka maalinta kowaad Xintai ah, in xogta waxa ay sidoo kale ma jirto, maxaa yeelay, gobolka macluumaadka jirin waa, in Neraiuchi inay doortaan madal waa wax adag. Xintai maalinteedii kowaad, macnaheedu ma aha in furan subaxdii, furnaan doonaa laga bilaabo marka oggolaanshaha booliska hoos yahay. Sababtan awgeed, ma in la banneeyo furitaanka waqtiga, waxaan inta badan tii pachinko aad leedahay bakhtiyaa. Intaa waxaa dheer, ku xiran tahay habka bakhtiyaanasiibka, fadlan ogow in ay jiraan sidoo kale waa arrin ah in hit ah kaas oo Xintai ma oga. bedelka
Xintai maalinta kowaad, sababtoo ah ma jirto waqti ku filan in uu akhriyo ciddiyaha oo dhan, ka tago qaybta kaas oo in la fiirsado, waxaad kaloo ka noqon oo keliya xaqiiqda ah in bilowga ciddiyaha xuddunta. Dabcan, haddii aad soo ururiyay xogta ee goobta Robo xogta sida Todoba, ruxruxo ah goob Horukon iyo ROM sidoo kale aynu tixgeliyaan.
Si kastaba ha ahaatee, eegaya sixitaanka dhidibkii, si ay u soo jiitaan macaamiisha, waa bedelka Xintai maalinta kowaad cidiyaha ugu fiican macaan yahay.
sida set Horukon iyo sixitaanka ciddiyaha of Xintai furan yahay maalintii ugu horraysay waa kan ugu fiican, waxaa jirta socday u janjeera in la adkeeyo la maalin kasta marayay. Dabcan, waxa ay sidoo kale ku xiran tahay dukaanka. Tan iyo maalintii ugu horraysay, martida soo wada ururin iska kay daa, dukaamada qaar ka mid ah in aynu by sii daayo si tartiib ah u soo kabsaday, sidoo kale waxaa jira dukaan ka soo baxay oo maalinteedii kowaad, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan marka hore in saameyn. Goobtani waxa ay tahay, u janjeera ee ku saabsan toddobaadkii isla markiiba ka dib markii dib u fiicnaan lahayd in la sii jeeg on joogta ah maalin walba.
waqtiga furin waa kiiska, sida dukaan saldhigga, tan waxaa la filayaa in macaamiisha jira dad badan oo ciriiri, waa in horay kormeerka hordhac ah oo ujeedadoodu tahay miiska laga bilaabo maalinta la soo dhaafay si ay u xaqiijin xogta uu u muuqdo qof wanaagsan kuwaas oo lagu bartay ilaa xad .